Kandida amin’ny fifidianana Biraon’ny Filankevi-Pitantanana GV 2020, misolo tena ny nanao fifanarahana arak’asa: Nwachukwu Egbunike · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2020 3:39 GMT
Nwach Egbunike moa dia poeta sady mpikaroka momba ny media sosialy, izay monina sy miasa ao Ibadan, Nizeria. Nanatevin-daharana ny GV ho mpanoratra izy tamin'ny marsa 2011, ary lasa Community Manager [Mpandrindra Vondrom-Piarahamonina] ho an'ny ekipan'ny efi-panoratana Afrika atsimon'i Sahara hatramin'ny taona 2018.
Nangatahana hamaly ireto andiam-panontaniana manaraka eto ambany ireto ireo kandidà rehetra amin'ny fifidianana 2020. Aza misalasala manontany zavatra hafa amin'i Nwach ao amin'ny fanehoan-kevitra ambanin'ny lahatsoratra teny anglisy!
GV no fianakaviako mivelatra, ho voninahitra [tsy mendrika] ahy ny hanompo ao amin'ny filankevi-pitantanana. Mari-pitiavana avy amin'ireo mitovy amiko ary antso hanome betsaka kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina tena tiako.
Efa hatramin'ny taona 2011 no nanoratako ho an'ny GV. Tamin'ny maha-volantera no nidirako ary saika nidirako avokoa ny tetikasan'ny Global Voices – Rising Voices, Advox, sns. Tao anatin'ny taona vitsivitsy aho izao no niditra lalina tamin'ny fananganana ny ekipa afrika atsimon'i Sahara, niainga avy amin'ny faritra iray ‘manahirana’ mankany amin'ny fijoroana maha-te-hankasitraka ao amin'ny vondrom-piarahamonina GV.
Taloha no kely ny fitantarana an'i Afrika Atsimon'i Sahara noho ny fihenan'ny mpandray anjara fototra. Saingy taona vitsy izao izahay no afa-nahazo vatsy roa [fanampiana], nampitombo ny fitantaranay ary afa-nihazona ny isa tamin'ireo lahatsoratra be mpamaky. Mazava loatra fa tsy noho ny nataoko izany. Fa lavitra izany. Tsy maintsy nisy fanoloran-tena sy asam-bondrona tao anatiny tao. Ny fahafahana miasa sy manentana ekipa, mamantatra fiaraha-miombon'antoka ary ny dian-tanana vitan'ny tena manokana mba ahafantarana ireo mpikambana ao amin'ny ekipa, ireo no antenaiko hitondra ny anjara asako amin'ny maha-solontena ahy ao amin'ny filankevipitantanana
Ny hanintona, hamboly ary hanolokolo ireo hirika famatsiambola hanampy an'i Global Voices hihazona ny fahaleovantenany sy maha-feo azo itokisana azy. Tsy maintsy tanterahana izany raha tiantsika ny hanohy amin'ny maha-mpampita antsika amin'ireo feo tsy voatondra feo indrindra.
Fanandrata-teny — noho ny antony miharihary. Raha ho an'i Afrika Atsimon'i Sahara, dia ady mitohy hatrany ny fiarovana ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahan'ny gazety eto amin'ny kaontinanta.
Manantena aho fa hianatra avy amin'ny tsara indrindra ary hanitatra ny fahalalako amin'ny fitantanana vondron'asa.
Tahaka izay efa nataoko tao anatin'ny taona vitsivitsy hatramin'izay niasako amin'ny maha-Community Manager SSA ahy, dia resaka anto-piainana miampy zavatra kely tsaratsara kokoa izany. Amin'izay fotoana izay aho manokana fotoana bebe kokoa isan'andro hanao ny zavara rehetra ilaiko atao – ny adidiko manokana, ara-pianakaviana sy arak'asa
Ny mihaino, mihaino ary mihaino hatrany. Imbetsaka ny mpitarika no azon'ny fakampanahy hiteny betsaka kokoa saingy talenta [miavaka] ny fihainoana izay rehefa tafiditra tsara, dia miteraka fahasamihafana be. Ny fihainoana bebe kokoa no ahafahana mahalala tsara kokoa ny olona mandrafitra ny vondrom-piarahamonina ary amin'ny alalan'ny fanaovana izany no ahafahana mivonona kokoa hikarakara azy ireo.